याद गर्नुभएको छ, औषधिको पछाडि हुने रातो धर्काको अर्थ के हो ?
हामीलाई थाहा छ कि डाक्टरको सल्लाह बिना औषधि खानु हुँदैन । तर सामान्यतय टाउको दुखेदेखि झाडावान्ता हुँदा भने कुन औषधि खाने भन्ने धेरैलाई ‘कन्ठ’ जस्तै भइसकेको हुन्छ र यस्तो भएमा हामी आँफै पनि औषधि खाने गरेका छौं । यो कुरा पनि थाहा नहुनेहरूका लागि भने विज्ञ ‘मेडिकल सञ्चालक’ हुन् ।
हामीमध्ये कतिपयले याद गरेका हुँदैनौं कि कुनै औषधिमा विशेष संकेत पनि हुन्छ भनेर । तपाईंले एकप्रति ट्याब्लेट औषधिको पछाडि हेर्नुभयो भने अधिकांशमा रातो धर्का देख्न सक्नुहुन्छ, दुखाइ कम गर्ने कडा औषधि र एन्टिबायोटिक्समा विशेषगरी यस्तो संकेत कोरिएको हुन्छ । यिनको खोलमा पनि यस्तो धर्सा हुन्छ ।यसरी औषधीमा कोरिएको रातो धर्काको हो – डाक्टरको सुझाव वा प्रेसक्रिप्सनबिना खान नहुने ।
हालै भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि यसबारे जानकारी दिँदै जथाभावी औषधि नखान सुझाएको छ । मन्त्रालयको ट्विटरमा ‘रातो धर्का भएका औषधि डाक्टरको सल्लाह बिना नखानुस् । तपाईं जिम्मेवार भए औषधिले पनि राम्रो काम गर्छ ।’
मुम्बई मिररका अनुसार खासमा यो रातो धर्सा भएको औषधि मेडिकल पसलहरूमा पनि डाक्टरको सुझाव लेखिएको पत्रबिना बेच्न पाइँदैन । त्यसैले ध्यान पुर्‍याउनुहोस्, चेतावनीसहित आएको औषधि यसै खाँदा ज्यानलाई राहतको साटो जोखिम बढ्न सक्छ ।
यो पनि – यो हो संसारकै सबैभन्दा फराकिलो सडक, जसको चौडाई २६ लेन छ । नेपालमा सडक फराकिलो बनाउने अभियान चलिरहेकै सन्दर्भमा संसारकै सबैभन्दा फराकिलो सडकको बारेमा समाचार प्रकाशित भएको छ । अमेरिकाको टेक्सास राज्यस्थित द क्याटी फ्रि वे संसारकै सबैभन्दा फराकिलो सडक मानिएको छ ।
टेक्सास राज्यको ह्युस्टन सहरको द क्याटी फ्रि वे २६ लेनको सडक हो, जसमध्ये १२ मुख्य लेन छन् भने ८ वटा लेन फिडर लेनका रुपमा र ६ वटा लेन म्यानेज लेनका रूपमा छन् । त्यसबाहेक यो सडकसँगै ४ वटा अलग्गै सर्भिस ट्रयाकसमेत निर्माण गरिएका छन् ।
यो सडकका प्रत्येक लेन ३ दशमलव ७ मिटर चौडा छन् । ती लेनको दायाँबायाँ निर्माण गरिएका फुटपाथको चौडाइसमेत ३ मिटर छ । हरेक लेनको बीचमा १ दशमलव २ मिटर ठाउँ खाली छोडिएको छ । यो सडकमा हरेक दिन २ लाख १९ हजार सवारी साधन गुड्छन् । अमेरिकाको सडक विभागका अनुसार यो सडकले आगामी ५० वर्षसम्म सेवा दिन सक्नेछ ।
बिहानी ५ टिप्स : दिन र स्वास्थ्य राम्रो बनाउन केके गर्नुपर्छ ?
बिहान खाली पेट लसुन खानुको चमत्कारिक लाभ
८७ लाख बढीले लगाए कोरोनाविरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप, पछिल्लो २४ घण्टामा ३१५ जना संक्रमित थपिए
एक सातामै स्लिम बन्न चाहनुहुन्छ ? यि ५ तरिका अपनाउनुस्
अब कक्षा १२ को प्रमाण पत्र स्कुलमै पाइने, बोर्ड धाउन नपर्ने !